Al-shabaab – Janaay Media
07:55: PM Wednesday August 21, 2019
Warbaahinta Kenya ayaa sheegay Sedax muwaadin oo Kenya u dhashay ay ka mid ahaayeen Dadkii ay Al-shabaab ku dileen Deegaanka Yaaq-baraawe ee gobolka Bay Talaadadii lasoo dhaafay. Dadka ay Al-shabaab laayen oo ahaa Shan qof waxay ku eedeeyeen in ay basaas u ahaayeen Dowladda Soomaaliya iyo Saaxiibadeed dagaalka ku taageera. Dadka Kenyan ka ah waxaa
Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaanka Buulo Mareer
Dagaal xoogan ayaa xalay waxaa uu ka dhacay deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Shabeellada hoose. Dagaalka ayaa waxaa uu u dhexeeyay Ciidamada xoogga iyo kuwa AMISOM oo dhinaca ah iyo dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Al-Shabaab xalay weerareen Saldhigyo Ciidamada xoogga iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Buulo
Posted by Abdikadar Hassan - March 26, 2019
Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka sameeyay deegaano ka Tirsan Gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya. Deeganada ay ciidamadda howlgalka ka sameeyeen ayaa kala ah Godale iyo Cadalay oo hoostaga deegaankaToora-toorow ee gobolkaasi. Sidoo kale Ciidanka Xooga Danab ayaa gudaha u galay deegaanada Luqmaan Cilmi shide iyo Baladul-amiin waxaana halkaasi isaga cararay Al-Shabaab
Shacabka ku nool deegaanada Baarka iyo Sanguuni ee dhanka waqooyi ee Magalada Kismayo ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xaalado bini adanimo oo la soo daristay kadib markii deegaannadoodi ay kasoo barakiciyeen Al-shabab. Gudoomiyaha deegaanka Baar Sanguuni Xuseen Axmed Cusmaan Maxamed ayaa sheegay in xaalad aad u Liito ay deegaanka ka jiro dadka deegaankana aysan heysan
Xukumada Rwanda ayaa xukun ku riday rag la sheegay in ay xiriir la leeeyihiin Al-shabaab iyo Daacish
Maxkamada Sare ee dalka Rwanda ayaa xukun ku ruday illaa iyo 15 ruux oo loo haysto in ay katirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish. 13 kamid dadkan dacwada lagu soo oogay ayaa lagu xukumay min 5 sano oo xarig ah halka 2’da kalana lagu xukumaya min 10 sano oo xabsi ah. Maxkamada sare ee dalka Rwanda